Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye Oo Xisbiyada Iyo Ragga Ka Sharraxan Ku Tilmaamay Kuwo Aanay Cidina Dooranayn, Umadduna Khaati Ka Taagan Tahay Qabyaaladda Qaawan Ee Ay Ku Ololaynayaan + Daawasho | FooreNews
Home wararka Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye Oo Xisbiyada Iyo Ragga Ka Sharraxan Ku Tilmaamay Kuwo Aanay Cidina Dooranayn, Umadduna Khaati Ka Taagan Tahay Qabyaaladda Qaawan Ee Ay Ku Ololaynayaan + Daawasho
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye Oo Xisbiyada Iyo Ragga Ka Sharraxan Ku Tilmaamay Kuwo Aanay Cidina Dooranayn, Umadduna Khaati Ka Taagan Tahay Qabyaaladda Qaawan Ee Ay Ku Ololaynayaan + Daawasho
FoorenewsSep 24, 2017wararka0
Siyaasi Obsiiye Oo Ka Dayriyay Xaaladda Qabyaaladdu Halka Ay Marayso Baaqna U Soo Jeediyey Salaadiinta Siyaasadda Ku Dhex Milmay Oo Uu Talooyin Siiyey
Hargeysa, 24 September 2017- (Foore)- Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ah Aqoonyahan iyo siyaasi Madax bannaan oo inta badan ka hadla xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsheed ee qaranka Somaliland ayaa si adag u duray nidaamka qabyaaladeed ee ay ku ololaynayaan axsaabta qaranku isaga oo sheegay in umaddu khaati ka taagan tahay xisbiyadaasi taasi oo keentay in maanta umaddii diiddo in ay cidna doorato oo aanay doorashada diyaar u ahayn isaga oo dhinaca kalena Madaxweynaha Mustaqbalku cuqaasha iyo madax-dhaqameedka dalkan ee siyaasadda ku milmay ugu baaqay in ay ka waantoobaan oo ay soo ceshadaan milgihii iyo maamuuskii ay hore u lahaayeen oo ay isaga baxaan qabyaaladda iyo xisbiyada siyaasadda ee ay ku dhex milmeen.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo warbaahinta la hadlay waxa uu umadda ugu baaqay in ay qarankooda ilaashadaan oo ay ka waantoobaan qabyaaladdan faraha ka baxday oo dalkeena dhaxalsiin karta cawaaqib xumo aynaan ka soo waaqsan isaga oo dardaaran culus u kala diray madaxda xisbiyada ee qabyaaladda shaadhka ka saaray iyo madax-dhaqameedka kuna booriyey bulshadu in ay dantooda gartaan oo iska tuuraan siyaasad xumada ragga maanta siyaasadda hor boodaya.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Markaan talo meel dhigaba saw tii Rabbi meel masii taal, baa nin laga hayay, waxaa naga hadlinaya mar walba wuxuun baannu ognahay sidoo kale. Waxa aannu mar walba ka hadlayno ee aanu bulshadayada iyo umaddayada kula hadlaynaa waa qiiro iyo feker na waxqabad oo na shidaya waxaanan u oomanahay in aan mar uun aragno dalkayaga iyo dadkayaga oo mar uun gaadhay waxqabad iyo horumar wanaagsan oo qayrkooda la tallaabsaday. Waxa kale oo na shidaya oo aannu mar walba la hadlaynaa waa wixii dhagahayagu ugu necbaayeen oo mar walba aannu maqlayno oo ay ka mid yihiin qabyaalad, caddaalad darro, musuqmaasuq oo ah waxyaabaha dhagahayagu maqlayaan kuwa ay ugu neceb yihiin. Haddii Ilaahay hammiga nagu guuleeyo oo arrimaha noo fududeeyo waa waxa aannu doonayno in aannu baabi’ino. Waxan aannu u taaganahay ee aannu ku hammiyaynaa gacanta Alle ayay ku jiraan oo haddii ay gacan bani aadam ku jiri lahayd hal seken kumaan fikireen. Ilaahay SWT waxa uu yidhi waxan dhulka ka dhacaya samada ayaa laga soo maamulaa oo Alle SWT isaga ayaa arrimaha oo dhan gacantiisa ku haya, taasi halagu baraarugo ayaanu leenahay”.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) waxa uu farriin u diray xisbiyada qaranka waxaanu yidhi: “Xisbiyadan qaranka ee durbaannada qabiilka qaatay ee tumaya waxaan ugu baaqayaa in ay barnaamijyo iyo hindise himiladooda ah ku ololeeyaan oo ay umadda qabyaaladda ka daayaan ay ku kala kaxeeyeen. Qabyaaladdan ay qaawiyeen ee ay shaadhka ka saareen iyo qabiilooyinkan ay isku soo ururinayaan haka daayaan. Shacabka laftiisa waxaan leeyahay waar ka daaya idinkuna qabiilkan aad shaadhka ka saaraysaan ee inta aad Huteelo isku soo urursataan ee aad odhanaysaan haddii aannu reer Hebel nahay xisbi hebel baannu taageersanahay ama ku biirnay. La idiinma diidana in cidda aad doontaan aad taageertaan laakiin si xarrago iyo milgo leh. Waxaan idin leeyahay marada saara oo shaadhka haka saarina oo waxa aad tidhaahdaan haddii aanu Gobol hebla nahay iyo haddii aanu degmo heblaayo nahay iyo haddii aannu xaafad heblaayo nahay sidaasaanu ku biirnay dhaha. Qabyaaladdu maanta meel xun bay inala maraysaa iyada oo aad ogaydeen wixii inaga soo gaadhay dhawr iyo sagaashamaadkii, maanta oodaha ayay soo jabisay. Waxaan leeyahay haddii aan waxba laga qaban oo aan maanta la joojin qabyaaladdaa lagu ololaynayo dhibkeeda iyo caanaheeda waad dhami doontaan”.
“Axsaabta Mucaarid iyo Muxaafidba waxaan leeyahay waar maanta umaddu way idin arkaysaa oo waxa ay leeyihiin khasab ku kala dooro yeeli mayno oo qofka haddii la yidhaa cuntadaa khasab ku cun dee ma cuni karayo haddii aanu doonayn. Dadkii maanta waxa ay leeyihiin khasab ku kala doorta nimankan (Musharraxiinta) ma yeelayno ee waxa aannu u baahanahay musharrax madax bannaan oo umaddan iyo dalkan u damqanaya Insha Allahu Ilaahay idamkii waanan ka tartami doonaa”. Ayuu yidhi siyaasi Obsiiye.
Siyaasi Aqoonyahan Cabdiqaadir Cali Obsiiye waxa uu baaq u diray Salaadiinta iyo Madax-dhaqameedka oo uu ku eedeeyey in ay ku milmeen siyaasadda xisbiyada isaga oo salaadiinta iyo cuqaasha farriin u dirayana waxa uu yidhi: “Waxaan la hadlayaa salaadiinta, cuqaasha iyo duubabka waxaan leeyahay waar milgihii aad umadda ku lahaydeen iyo karaamadii ha iska qaadina oo ka dhex baxa siyaasaddan aad ku dhex milanteen waayo waxaad ahaydeen kuwii marjaca umaddan u noqon lahaa ee marka khilaaf iyo dhibaato timaaddo loo soo noqon lahaa. Waxaad tihiin kuwii umadda kala saari lahaa marka ay xaajadu adkaato balse idinka oo sidan ah oo siyaasad ku dhex milmay oo aad xisbiyada u kala dab qaaddaan yaa idin aaminaya. Waar dib uga noqda arrinkaasi cidi idin aamini mayso haddii kale”. Ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye.
Daawo Hadalka Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye:
Previous PostBeelweynta Gaashaanbuur Axmed Faarax oo balanqaaday inay hormuud ka noqonayaa Ololaha Xisbiga KULMIYE , Taageerrona u muujiyay Murrashaxa Muuse Biixi Cabdi. Next PostKumuu Ahaa Fanaankii Mulaxameystihii Abwaankii Cabdillahi Qarshe”W/Q Cumar Serbiya